Ụbọchị My Pet » Aghaghị Nkịta
site Claire Cook
emelitere ikpeazụ: Nov. 22 2020 | 6 min agụ
M kpebiri na m na-ege ntị na ezinụlọ m na-azụ si n'ebe. “E nwere ihe ndụ mgbe ịgba alụkwaghịm, Sarah,” nna m kwusara, bụghị na Ọ mgbe a gbaa ya alụkwaghịm.
“The aba ị na-eche, na ike ọ ga-” bụ nwanne m nwaanyị Carol obere mkpuru, dị ka ọ bụrụ na ọ nwere ụfọdụ ụzọ maara ma ma ọ bụ na nke ahụ bụ eziokwu
Mgbe ọnwa nke na-eleghara ha, anabatakwa onye ad ke akwụkwọ akụkọ yiri kasị detached ụzọ-enye. M ga-enweghị na-anọdụ ala na ụlọ oriri na ọṅụṅụ na a enyi nke a enyi nke otu n'ime ụmụnne m, eleghị anya Michael si, ma eleghị anya, Johnny ma ọ bụ Billy Jr. si, eme na-enwe nri m ka bụ ụjọ nụrụ ụtọ. Ekwesịghị m ịtachi obi ọbụna a ekwentị na mkparịta ụka na onye nwanne m nwaanyị Christine kwuru okwu n'ime akpọ m. My atụmanya na m ga-eji nwayọọ jikọọ na akwụkwọ ma ọ bụ na anyị agaghị.
N'eziokwu, Olileanya na-adịghị ihunanya, ochie nwa amadi na-achọ nwaanyị enyi ndị na-arụ mara iri, na-agba egwú na ngwa ngwa ntoju n'anya. World Cup, n / s, na-eto eto 50s, nwunye ya nwụrụ, hụrụ nkịta, ụmụ na ogologo meandering ígwè agafe.
The ad jumped si na m nke mbụ m na-ele anya. E bụghị ọtụtụ mpi. Kama n'ihe ize ndụ a Geographic na-awụlikwa elu otu n'ime ndị na Boston akwụkwọ akụkọ, M ga-kpebiri na ọ bụ nchebe ma na-erughị nke mgbalị igbochi m search nke otu na peeji nke Ọkwa Ngwaahịa na mpaghara-enwe kwa izu. Seven obodo ruo ọkara n'etiti Boston na Cape okporoko e clumped ọnụ dị ka otu mbipụta. Anọ ogidi nke “Inyom na-achọ mmadụ.” A nkeji iri na ise nke otu kọlụm nke “Men achọ Women,” abụọ Ndenye nke “Inyom na-achọ Women,” na ihe fọdụrụ na kọlụm bụ “Men achọ Men.”
M na-enweghị n'uche nke na-agbakwụnye na disheartening njuputa nke heterosexual inyom ịtụkwasị mgbasa ozi, otú ahụ ka m tụgharịa m ntị nke abụọ Atiya. Ọ na-e no notu nke karịrị ya òkè nke akara freaks, dị ka nke a Ihọd-Ịchọ mara mma nwaanyị n'etiti 5'4″ na 5'6″, 120-135 lbs., adụ-okwu, ọ dịghị àgwà ọjọọ, ego nchebe, n'ihi na o kwere omume mmekọrịta. M nwere ike nke a na-dreamboat-eme ya nwere mmekọrịta kwụpụ na ọnụ ọgụgụ na-egosi ha akụ okwu tupu ya penciled ha n'ihi na a anya-na-ahụ.
Ọzọkwa a otu. Quaint, maa mma, fọrọ nke nta maara n'ụzọ ụfọdụ. Mgbe m na- ngwa ngwa ntoju n'anya, ọ dị nnọọ mere m na. Mere ka m na-echeta otú owu na-ama m bụ.
M gburugburu na-ad na-acha uhie uhie pen, mgbe ahụ dọwaa ya nke akwụkwọ na a ọnụ ha pịrị rektangulu. M na-ebu ya na-na kọmputa m na mesịa a nzaghachi ngwa ngwa, tupu m nwee ike ịgbanwe obi m:
Ị ada kwa ihe dị mma na-ezi, ma ikekwe anyị nwere ike a cup kọfị ọnụ anywayóat a n'ebe ọha. M a WF, gbara alụkwaghịm, na-eto eto 40, onye hụrụ nkịta na ụmụ, ma anaghị eme eme nwere ma.
–Anya akpachapuru anya nchekwube
M na-ezigara m akwụkwọ ozi a Igbe 308P na County njikọ itieutom, nke ga-, n'oge ya, zipu ya. M enclosed a obere ego ka e meere m igbe nọmba maka Ibọrọ. -Erughị otu izu ka e mesịrị m nwere m azịza:
Mmekeme nwere ihe ùgwù nke ịzụ ị kọfị na Morning ebube na Marshbury na 10 ABỤ a na-abịa Saturday? Aga m na-ebu otu odo rose.
-Na-echere gị Response
The kpọrọ òkù ahụ mesịa ke oké ọdụ akwụkwọ n'ezie nkumigwe, akwụkwọ ozi O na E-akpụ siri ike ntụpọ nke nwa ink, dị nnọọ ka ochie ntuziaka nke m bụ nwata. M dere azụ nanị, Time na ebe-adaba adaba. Na-atụ anya ya.
M na-emeghị banyere m fọrọ nke nta na-ụbọchị ka onye ọ bụla, sonso ọbụna kwere ka m na-eche banyere ya ohere. E nwere bụ nanị mba uche na-echefu m na-enwe olileanya elu, ọ dịghị mkpa ka egosiputa onwe m n'ihi na a ọdịda.
M tetara a ugboro ole na ole Friday n'abalị, ma ọ bụghị kwa ọjọọ. Ọ bụghị dị ka ma ọ bụrụ na m nọrọ niile abalị tossing ma na-atụgharị. M gbalịrị dị nnọọ di na nwunye nke dị iche iche mgbanwe na Saturday ụtụtụ, N'ikpeazụ edozi na a odo sweta na ogologo uwe na ochie Ifuru ebipụta. M anyị achọọ ntutu m, tụbara na ụfọdụ mascara na leghaara m ezé a abụọ oge tupu n'isi si ụzọ.
Morning ebube dị mkpirikpi nke trendy, a delightfully tojuru hodgepodge nke anyanwụ na-streaked greenery, na-acha ọcha lattice na gburugburu button tebụl na mismatched ígwè oche. The kọfị dị ike na butere ngwongwo arụrụ n'ụlọ na-atọ ụtọ. I nwere ike na-anọ a tebụl maka awa na-enweghị na-unyi anya site na ndị mmadụ na-arụ ọrụ e.
The ogologo Saturday-ụtụtụ ahụ-esi akara kụziri ruo n'ọnụ ụzọ, na o were m a nkeji ịnwata m ụzọ m n'elu tebụl. Enyobara m ngwa ngwa, m uche ziri ezi na bufee, agbalị oyosio rose yiwere gafee table, icheta oghere akara m mụgharịrị na mbanye n'elu.
“Sarah, m darlin’ girl. Gịnị a mara mma anya. Bịa ebe a na-enye gị akanieren Papa a mmakụ.”
“Papa m? Kedu ihe ị na-eme ebe a?”
“Ọfọn, na nke ahụ bụ a mma otú-ime-gị-eme. Ma otu m nnọọ mmasị inyom na.”
“Where'd ị na-ahụ rose, Papa m?”
“Ẹmende ya nke a ụtụtụ na gị hụrụ n'anya nne rose ubi. Chineke ike ya mkpụrụ obi.”
“Uh, onye bụ onye ya maka?”
“A nwaanyị enyi, mmanụ aṅụ na-. Ọ bụ eke N'ezie nke ndụ a na papa gị ga-nwaanyị enyi now, Saso. M na-eche gị sainted nne-agba izu ya mma m kwa ụbọchị.”
“Ya mere, a, na ị na-eme atụmatụ izute nwaanyị a na enyi ebe a, Papa m?”
“Na m na-, Chukwu kwado.”
Ebe ke uzuzu uzuzu nkuku nke ụbụrụ m, synapses e ejikọta. “Oo chimoo. Papa m. M gị ụbọchị. M zara onwe gị ad. M zara m nna onye mgbasa ozi ahụ.” Echere m, nile onye mgbasa ozi na ụwa nile m nwere iji bulie onye a?
My nna lere m anya blankly, mgbe ahụ weliri ya shaggy na-acha ọcha nku anya na mberede. Anya ya kpaliri skyward ka ọ cocked isi ya n'otu akụkụ. Ọ tụgharịrị ọbụ aka ya abụọ elu arụkwaghịm. “Ọfọn, ugbu a, n'ebe ahụ bụ otu n'ihi na nnukwu ụlọ ahịa akwụkwọ. Honey, ọ dị mma, ọ dịghị mkpa na-atụgharị na-acha ọcha dị ka ị hụrụ a mọ. Ebe A. Nke a na-egosi nanị m kpọpụta unu mara diamond si riffraff.”
Faking a ngwa ngwa mgbake bụ a Hurlihy ezinụlọ omenala, otú ahụ ka m squelched onyinyo nke a otu odo bilie a n'aka ndị ọzọ karịa nna m. M wee a ngwa ngwa ume, adabere na emebi obi m. “Ọ bụghị nanị na, Papa m, ma eleghị anya, ị na m nwere ike ime a Jerry Springer show ọnụ. Olee otú 'n'obi ëFathers Ònye Mkpapụ Daughters'? Echere m, nke a bụ nnukwu, Papa m. The Oedipal pụtara aloneó”
“Oedipal, smedipal. Unu ga-echefu ihe niile na mahadum na m ugbu a, Sarry nwaanyị.” My nna-enyopụ anya site si n'okpuru ya nku anya. “Ih'ọma dị ka ị na-, na ị na-ọbụna lovelier gị mgbe ị na a smidgen obere tụgharịa.”
M loro anya mmiri na o yiri ka m nanị nhọrọ e wezụga tụgharịa, ma nọdụ ala na oche gafee si nna m. Anyị onyenchere nwaanyi wee site na m jisiri ịtụ a kọfị. “Chere obere oge. Ị bụghị a na-eto eto na iri ise, Papa m. Ị na iri isii na isii. Ma mgbe bụ oge ikpeazụ gị nọkwasịrị a igwe kwụ otu ebe? Ị anaghị nwere igwe kwụ otu ebe. Na ị kpọrọ nkịta.”
“Honey, atụla nkịtị. Chee echiche nke ya dị ka uri, dị ka onye m na ala nke mkpụrụ obi m. Na, Sarah, Obi dị m ụtọ na ị na-akpa malitere ọzọ. Kevin bụ na ya ụbọchị kasị mma mma ezuru gị, sweetie.”
“M zara m nna onye ad. Nke ahụ ọ bụghị akpa. Nke ahụ bụ na-arịa ọrịa.”
My nna na-ele ka a mara mma onyenchere nwaanyi leaned gafee tebụl anyị. Anya ya nọrọ na ya dị ka ọ na patted aka m ma sị, “Ị ga-eme ka mma oge ọzọ, mmanụ aṅụ na-. Dị nnọọ na-ahụ ọrụ siri ike.” M na-ele ka nna m raked a ikpaohia oké ajị ọcha n'ebe ya mmiri anya agba aja aja. The Ihọd nwere ike ịhụ ihe mmụta dị na…Jesus, a ụbọchị nwa ya nwaanyị.
“Oh, Papa m, Echefuru m niile banyere gị. Ị wee na-ezighị ezi ụbọchị, kwa. Ị ga-owu na-ama na-enweghị mama m, good?”
The onyenchere nwaanyi biliri, jidere nna m anya na-achị ọchị. Ọ pụwa, o wee tụgharịa ya na-esi laghachi m. “M na-eche banyere ya kwa ụbọchị, ụbọchị nile. Na uche n'ihi na ike nke m eke ndụ. Ma echegbula banyere m. M nwere a anọ elekere.”
“Kedu ihe ị chere, a anọ elekere? Anọ elekere Nkume?”
“Emela, darlin '. A wee iko mmanya n'elekere anọ ọzọ na ọmarịcha nwaanyị. Ònye ike omume jide a kandụl gị, m ụtọ.”
M chere na a na inwe ụbọchị na a nso iman bụ nnọọ obere traumatic ma ọ bụrụ na ọ bụ nanị otu n'ime ụbọchị ụbọchị abụọ. M na-arụrịta ụka ma na faịlụ na tidbit pụọ maka ọdịnihu akwụkwọ, ma ọ bụ iji na-emikpu miri emi ma na ozugbo agugo na ihe ahụ merenụ ama metụrụla. M weliri m kọfị Foto Ụlọ Nga egbugbere ọnụ m ka. My nna ọchị-agba ume.
Ikekwe enweghị akara bụ na m nkwojiaka. Ma eleghị anya, m nanị chefuru ilo. Ma dị ka nna m ruru gafee tebụl na a ikpo akwụkwọ akwa nhicha ka mop na-ere ọkụ kọfị m agba, M chere na ọ ọbụna yikarịrị ka m nanị mgbe mụtara ịbụ a toro-elu.
Esi na Udidi Ịhụnanya?